UPDATE: Degmada Buulo-barde oo laga kala cararay, fatahaada webiga Shabeelle dartiis! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Degmada Buulo-barde oo laga kala cararay, fatahaada webiga Shabeelle dartiis!
UPDATE: Degmada Buulo-barde oo laga kala cararay, fatahaada webiga Shabeelle dartiis!
Buulo-barde (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya degmada Buulo Barde ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka soconayo barakac ay samaynayan dadka deegaanka, ka dib markii uu Webiga Shabelle bilaabay in uu degmadaasi ku fataho.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in Webiga Shabelle uu maalmihii la dhaafay ku fatahaayay Degmada Buulo Barde, balse uu shalay sameeyay fatahaaddii ugu darneyd, taasoona dadka ku khasabtay in ay guryahooda ka cararaan.
Sidoo kale, waxaa lagu soo warramayaa, in Axada maanta ah uu barakac hor leh ka soconayo Degmada Buulo Barde, ayna dadku ka cararayaan waxyeelo ka soo gaarta fatahaadaha.
Gudoomiyaha KMG ee Degmada Buulo Barde Liibaan Cabdi Nuur (Burisow), ayaa sheegay in fatahaadaha Webiga Shabelle ay kala jareen labada qaybood ee degmadaasi, kadib markii ay biyo badan soo galeen.
Degmada Buulo Barde
webiga shabeelle fatahaaday